မာရီလင် မွန်ရိုး ဘ၀နိဂုံးမှ ရွှေရတုတိုင် ………..အပိုင်း ( ၂ ) | Freedom News Group
by FNG on August 13, 2012	by Spring Flowers အမေရိကန်အစိုးက ယခင် ထိမ်ချန်လျို့ဝှက်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို
ထုတ်ပေးရတဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေ Freedom of Information Act ဆိုတာ
၁၉၉၇ မှာ ပေါ်လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် FBI က ဟိုးအရင်က လျို့ဝှက် အမှုတွဲတွေကို ၂၀၀၆
မှာ ထုတ်ပေးခဲ့ရာမှာ မာရီလင်မွန်ရိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း ပါခဲ့တယ် ။
အဲဒီစာတွေမှာ သမ္မတရဲ့ ညီ Robert Kennedy နဲ့ မွန်ရိုးတို့ ဆက်ဆံရေးကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ် ။
အဓိက လိုရင်းကို ပြောရရင် ရောဘတ်က သူ့မိန်းမကို ကွာရှင်းပြီး မွန်ရိုးကို ယူပါမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ဖူးသတဲ့ ။
မှတ်ချက် ။ ။ FBI = Federal Bureau of Investigation အမေရိကန် ” နိုင်ငံတွင်း ” ထောက်လှမ်းရေး
CIA =Central Intelligence Agency အမေရိကန် ” နိုင်ငံအပြင်ဘက် ” ထောက်လှမ်းရေး
ဒါပေမယ့် အဲဒီကတိကို ရောဘတ်တစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ အကောင်အထည်ဖော်မှာ
မဟုတ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတဲ့ မွန်ရိုးဟာ သူတို့ရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းဇာတ်လမ်းကို မီဒီယာမှာ
ထုတ်ပြောပစ်လိုက်မယ်လို့ ချိန်းခြောက်သတဲ့ ။ ဒီတော့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်လည်း ဖြစ် ၊
အသားအရောင် မခွဲခြားရေး တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်သူ civil rights activist လည်း ဖြစ်တဲ
့ ရောဘတ်အတွက် မွန်ရိုးဟာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုတယ် ။ လုပ်ကြံသူများရဲ့ အကြံက ”
မွန်ရိုးဟာ ခဏခဏ ဟန်ဆောင် သေကြောင်းကြံရင်း နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တတ်တယ် ၊ ဒီတော့ ဒီတခါ
အဲလို သေကြောင်းကြံအောင် အားပေးအားမြှောက် ပြုမယ် ၊ ဒါပေမယ့် အရင်ကလို ပြန်သတိရလာတာမျိုး ၊
အချိန်မီ ဆေးရုံရောက်တာမျိုး မရှိစေရ ” ။
အဲဒီ FBI စာရွက်စာတမ်း ( အစီရင်ခံစာတွေ ) အရ မွန်ရိုးသေမှု မှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ
့ ကြံရာပါတွေကတော့ Robert Kennedy ( သမ္မတရဲ့ ညီ ) ၊ Peter Lawford ( ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်း
သားလည်း ဖြစ် ၊ ကနေဒီညီအစ်ကိုရဲ့ ယောက်ဖလည်းဖြစ်သူ ) ၊ မွန်ရိုးရဲ့ စိတ်ကုဆရာဝန် Dr. Greenson ၊
မွန်ရိုးရဲ့ အိမ်ဖော် Eunice Murray ၊ မွန်ရိုးရဲ့ အတွင်းရေးမှုး Pat Newcomb တို့ ပါကြတယ် လို့ ဆိုတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီ FBI အစီရင်ခံစာတွေ ရဲ့ အစမှာ ” ဒီသတင်းတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို သတင်းရေးတဲ့သူက မသိပါ ၊
ဒါကြောင့် မှန်၊ မမှန် အတည်မပြုနိုင်ပါ ” လို့လည်း ပါတယ် ။ ( ရေးတုန်းက ရေးပြီး ….ဟွန်း )
ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးရှက်ဗ် Khrushchev
ခရူးရှက်ဗ် အတွက် ကျင်းပတဲ့ ပွဲတခုမှ မာရီလင်မွန်ရိုး
ယခင်က ကျူးဘားခေါင်းဆောင် Fidel Castro
ယခု Fidel Castro ( ကျူးဘားရဲ့ အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ကလည်း Fidel Castro ရဲ့ ညီ Raul Castro ဖြစ်ပါတယ် ။ )
ဦးသန့် ( တတိယမြောက် ကုလသမ္မဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ် …. ၁၉၆၁ ကနေ ၁၉၇၁ ထိ ရာထူးသက်တမ်း နှစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းခဲ့တယ် ။
ဦးသန့် ဟာ ကနေဒီနဲ့ ပေါင်းပြီး ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးရှက်ဗ်ဆီက သဘောတူညီချက်တွေ ရခဲ့တယ် ။ သဘောတူညီချက်က လူသိရှင်ကြားနဲ့ လျို့ဝှက် ဆိုပြီး ပုံစံ နှစ်မျိုးနဲ့ ပါ ။ လူသိရှင်ကြား သဘောတူညီချက်အရ ဆိုဗီယက်က ကျူးဘားမှာ တပ်ထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ဆိုဗီယက်ကို ပြန်သယ်သွားခဲ့တယ် ၊ အဲဒီအတွက် အမေရိကန်က ကျူးဘားကို ဘယ်တော့မှ မကျူးကျော်ပါဘူး လို့ ကတိပေးရတယ် ။ လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်ကတော့ အမေရိကန်က တူရကီနဲ့ အီတလီမှာ သွားတပ်ထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွေကို ဖြုတ်ပေးရပါတယ် ။ ( အမေရိကန်က အထက်ကချည်း နေချင်ပုံဘဲနော် ….သူ့ကျတော့ လျှို့ဝှက်၊ သူများကျတော့ ပေါ်တင် )
အရေးအခင်းပြီးတော့ ကနေဒီ က ဆိုတယ် …..” ဦးသန့်ရဲ့ ကျေးဇူးကြွေးတွေဟာ
debt . ” တဲ့ ။
စံပြမိသားစုဆိုတာ ဂလိုကိုး ( ကနေဒီနဲ့ သူ့ First Lady …)
From: ဘာသာပြန်, ရုပ်ရှင်, ဖျော်ဖြေရေး	← တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် သမ္မတ တွေ့ ဆုံ
မြောင်းမြ NLD တွေ ပါတီ တွင်း ဒီမိုကရေစီ ကင်းမဲ့ မှု ကြောင့် ဆန္ဒပြ ပြီ →
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,527,055 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in Englishmyanmar-sea-games-reuters-101213.JPGMyanmar beat Timor Leste to record second straight winMyanmar hosts international coming-out partymyanmar-travel-AFPrelax-101213.jpgMyanmar may score better than Malaysia on human rights, says Suhakam chiefLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar's president asks Philippines for more aidWant Burma info in your inbox each morning?